सरस्वती पाण्डे 'सरस'/मुलुकमा बलियो सरकार छ । तर, जन अनुभूति भने कमजोर, सरकार भएको र कतिपय अवस्थमा सरकार नै नभएको अनुभूति गरेको सुनिन्छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक होमिएपछिको यस अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनको सकस करको दायरा फराकिलो पारिएको अवस्थाले बुझाएकै छ । के देशमा संघीयता टिक्दैन ? संघीयताको राँको लिएर आउनेहरू बेकुफ हुन ? देशी–विदेशी शक्तिका उक्साहटमा ल्याइएको संघीयता देशलाई घाँडो भएको हो ? बढ्दो करवृद्धि र विकासको अवस्थालाई हामीले बुझ्न नसकेको हो ? सार्वजनिक सवारी साधनमा कहिलेकहीँ यस किसिमका कुराहरू सुन्ने गर्छु म । यस्ता कुरा गर्नेहरू मुलुकको जिम्मेवार पदमा रहेको जस्तो लाग्छ । तर, नहुन पनि सक्छन है !नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन । टिक्दैन । पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर परिक्षण गरौं भन्ने आवाज नआएको पनि होइन संविधान निर्माणताका । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत अन्य पार्टीपंक्तिका नेताहरूले भनेको सम्झन्छु । अहिले संघीय प्रणालीको अवस्थालाई हेर्दा उनीहरूका कुरा झलझली आँखामा आउँछ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भने पनि अधिकार अनुभूति भने हुने गरेको छैन । आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू–खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बिजुली । यस्ता अधिकारबाट जनता बञ्चित मात्र भएका छैनन्, कस्तो हुन्छ भनेर देख्न समेत नपाएका सूचना दैनिक रूपमा सञ्चार माध्ययमा सुनिएकै छ । अनि कसरी भन्नु र, सिंह दरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्यो भनेर । कहिले पुग्छ ? के देशमा कर बढाएर मन्त्री र सांसद पाल्दैमा संघीयता कार्यान्वयन हो ? संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ । हामी परीक्षणको अवस्थामा छौँ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा संघीयता मुलुकमा संघीयता टिक्दैन । यो हुनु भनेको संघीयता पक्षधर फेल हुनु हो । प्रत्येक प्रदेशको आयास्रोतको भरमा उक्त प्रदेश पालिन गाह्रो देखिन्छ । हाम्रा नेता आयस्रोत बढाउनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति लागेको देखिन्छ । जुन जनभावना विपरित छ ।
त्यस्तै, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना वित्यो । जनचाहना अनुसार कति काम भए ? यसको कुनै लेखाजोखा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन सरकारले । प्रधानमन्त्री ओली अनावश्यक ‘फोस्रा गफ’ दिंदै हिंडेका छन् । प्रदेश संसद चहादै हिंडेका छन् । विपक्षी दललाई गाली गर्दे समय विताएका छन् । जिम्मेवारी बोध नभएजस्तो, कुरा नबुझेजस्तो, हेर्दा परिपक्व तर व्यवहार केटाकेटीजस्तो ! के ओली नेतृत्वको पञ्चवर्षे सरकार यत्तिकै बित्ला ? बलियो सरकार र पार्टी हुँदा पनि विकासले गति लिन नसक्ला ? यस्तो अवस्थतामा पनि विकास नभए अब कसको अपेक्षा कहिले किन गर्ने ? जनतामा गहिरो आशंका छ ।
प्रकाशित ५ भाद्र २0७५ , मङ्गलबार | 2018-08-21 01:50:12